Wararka Maanta: Khamiis, Dec 5 , 2013-Ergayga Midowga Yurub u qaabilsan Somalia oo taageeray habkii loo maray Kalsooni kala noqoshadii Ra’iisul Wasaare Saacid
Ergayga gaarka ah ee Midowga Yurub u qaabilsan arimaha Somalia, Michele Cervone D’Urso ayaa go;aankaasi ku tilmaamay mid qayb ka ah hirgalinta dastuurka Somaliya, isagoo xusay in Midowga Yurub ay u hambalyaynayaan mudanayaasha barlamaanka.
“Midowga Yurub waa uu soo dhaweynayaa sida hogaanka dowladda hadda jirta ay u ixtiraameen hirgalinka dastuurka,“ ayuu ku yiri Michele Cervone D’Urso oo hadal kooban ku soo qoray boggiisa Twitterka maalmo ka dib marki la riday xukuumadda ra’iisul wasaare Saacid .
Waxaa kaloo masuulkan uu sheegay in shaqo aan la dhayal san karin uu qabtay raysul-wasaaraha xilka ka dagaya, isagoo xusay in sanadkii uu xafiiska joogay uu hormar ballaaran ku sameeyay hayado badan oo dowladda muhiim u ah.
Sidoo kale Michele ayaa inta raaciyay in Midowga Yurub uu taageero dheeri ah siin doono dowladda Soomaaliya, isla markaana loo baahan yahay in madaxda dowladda ay ka dhabeeyaan ballan-qaadyadii ay sameeyeen markii la soo dooranayay.
Masuulkan ma uusan soo hadal qaadin khilaafka la sheegay in uu horay u dhexmaray madaxweynaha iyo rasal wasaaraha ,kaasi oo la sheegay inuu ka dhashay isku-shaandhayn lagu sameyn lahaa golaha wasiiradda.
Ugu danbayn, hadalka ka soo yeeray Midwoga Yurub ayaa ku soo beegmaya xilli hay’adda Transparency International ay sheegtay in Somalia ay kaalinta koowaad kaga jirto wadamada dunida ugu musuq-maasuqa badan,iyadoo kaalmaha hore ay kula jiraan wadamada Afgaanistan iyo Waqooyiga Kuuriya inkastoo markii danbe ay dowladdu beenisay.